NYI LYNN SECK 18+ DEN: For Sale #1
Song Title : မင်းအကြောင်းတွေ
Composed by NLS
Price: Negotiable w/t Bullshit VCD!
မင်းအကြောင်းတွေ ငါလေမသိခဲ့ပါ စိတ်ဓါတ်တွေ ကျဆုံးသွားတဲ့အခါ
မင်းရှိမယ့် လမ်းတွေကို ငါမျှောငေးလို့ ဘယ်သူမှမရှိတဲ့ လမ်းပှေါ ငါတစ်ယောက်ထဲမို့
မင်းရဲ့စိတ်နဲ့ အရာရာ မေ့လျော့ကာ
ဦးနှောက်နဲ့ အသိဉာဏ် ငါမပိုင်ခဲ့ပါ
အဝေးပြေးတဲ့မင်းကို အချိန်တိုင်း တမ်းတ
ရူးသွပ်တဲ့ စိတ်ကူးတွေနဲ့ အတိုင်းဆမဲ့ မျှောလင့်ခြင်းက ငါ့ဘဝနဲ့ ဘယ်တော့များမှ ဆုံးမလဲ
အချိန်တွေတိုင်း နေရာတိုင်း ငါဟာ မင်းအကြောင်းများပဲ တမ်းတမိ
ရာသီတိုင်း နာရီတိုင်း မင်းအကြောင်းများက ခေါင်းထဲ အမြဲရောက်နေတယ်
မင်းမရှိတဲ့နေ့တွေ ရင်မဆိုင်ရဲပါ အားလုံးနဲ့ရင်းကာ ငါဆုံးရှုံးခဲ့ရ
မက်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်တွေလည်း လွင့်ပျောက်သွားတဲ့ တိမ်တိုက်လိုပဲ မင်းအနမ်းတို့ ပြန်ကာပေးဦးမလား
မင်းမရှိရင် ငါလေ မနေတတ်ဘူး မင်းအတွက်နဲ့ ငါဟာ အချိန်တိုင်းရူး
[ Download Demo Song ]
Attention: Hi Myanmar Copycats, dont steal others' songs anymore, so shameful!
If you interest in this song, contact me via email. Process with Master, Visa cards are welcome. :P
Technorati Tags: Nyi Lynn Seck, Song, Myanmar Song
Posted by NLS at 6/22/2006 09:59:00 AM
No response to “For Sale #1”